यी हुन् ओप्पो कलरओएस सिक्सका फाइदा, कसरी प्रयोग गर्ने ? – Lokpati.com
नेपाली काँग्रेस नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी मृत्यु केपी शर्मा ओली प्रचण्ड चितवन नेकपा राशिफल पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड नेपाल प्रहरी अपराध सरकार पक्राउ अमेरिका प्रधानमन्त्री
यी हुन् ओप्पो कलरओएस सिक्सका फाइदा, कसरी प्रयोग गर्ने ?
By लाेकपाटी न्यूज On ९ मंसिर २०७६, सोमबार १६:२६
एजेन्सी । ओपो मोबाइलको कलरओएस सिक्सका साथमा रेनोटू एफ नेपालमा सार्वजनिक भएको छ। सार्वजनिक रेनोटू एफ नेपालमा सार्वजनिक भएसँगै उपभोक्तामा यो ओएसको क्षमता र यसबाट कसरी सर्वाधिक फाइदा लिन सकिन्छ भन्नेबारेमा हामी जानकारी दिँदै छौं।
कलरओएस सिक्सका स्मार्ट साइडबार, नेभिगेसन गेस्चर्स, राइडिङ मोड, पार्टी मोड, गेमिङ असिस्टेन्ट, पावर सेभर लगायत फिचर्सको उपयुक्त प्रयोग कसरी गर्ने ?
स्मार्ट साइड बार : स्मार्ट साइडबार सक्रिय हुँदा नेभिगेसन पहिलेका तुलनामा धेरै नै सहज बनेको छ। स्क्रिनको साइडबाट हल्का स्वाइप गरेकै भरमा उपभोक्ताको छनोटका लागि क्विक टूल्स र क्विक एप्स प्रस्तुत हुन्छन्। क्विक टूल्स अन्तर्गत स्क्रिनशट, स्क्रिन रेकर्डिङ र ब्लक ब्यानर्स लगायत उपलब्ध हुन्छन्। यसमा आफूले सर्वाधिक प्रयोग गर्ने क्विक एप्सको प्रयोग गरी सहज र सुलभ नेभिगेसनको मज्जा लिन सकिन्छ। यसको प्रयोगका लागि सेटिङ अन्तर्गत स्मार्ट साइडबारमा गई (कन्भिनियन्स एइड अन्तर्गत(स्मार्ट साइडबारको छनोट गर्नुपर्ने हुन्छ।
नेभिगेसन जेस्चर्स : नेभिगेसनलाई अझ सहज र सुलभ बनाउने सोचका साथ यसमा विभिन्न जेस्चर्सको ब्यवस्था गरिएको छ। केही साधारण र सहज जेस्चर्सका माध्यमबाट फोनका निकै महत्वपूर्ण फिचर्समा सहज पहुँच बनाउन सकिन्छ। जस्तै स्क्रिनमा डबल ट्याप गर्दा फोन सहजै अन हुन्छ। उपकरणको क्यामेरा अन गर्नका लागि गोलाकार (सर्कल) बनाउने उपकरणको फ्ल्याशलाइट सक्रिय गर्नका लागि अंग्रेजी वर्णमालाको ‘भी’ बनाउने
तीन औँला फोनको स्क्रिनमा स्लाइड गरी स्क्रिनशट लिने सुविधा स्प्लिट स्क्रिनको उपयोग गर्नका लागि तीन औँलाले स्लाइड अप गर्ने
राइडिङ मोड : राइडिङ मोडका माध्यमबाट प्रयोगकर्ताले सडकमा सवारी चलाइरहेका बेला ध्यानभंग हुने सम्भावनाबाट जोगाउँछ । कलरओएस सिक्सले प्रयोगकर्तालाई सडकमा हुँदा आउने नोटिफिकेसन माथि नियन्त्रण राख्न सघाउँछ। यसमा रहेको डु(नट) डिस्टर्ब राइडिङ, मार्फत् एनिवान, कन्ट्याक्ट्स अन्लि, फेवरेट कन्ट्याक्ट्स अन्लि वा सम्पूर्ण कल नै नलिने लगायत निर्णय गर्न सकिन्छ ।
यसरी अनावश्यक कल फिल्टर गरी प्रयोगकर्ताले सुरक्षित तथा आरामदायी यात्राको मज्जा लिन सक्छन्। राइडिङ मोड अन गर्नका लागि सेटिङ मातहत९स्मार्ट सर्भिसेज्९स्मार्ट ड्राइभिङ अन्तर्गत ९राइडिङ मोडको छनोट गर्नुपर्ने हुन्छ।
पार्टी मोड : फोनमा रहेको पार्टी मोड सुविधा मार्फत आफ्नो प्लेलिस्ट साथीहरु संग सिंक गरी पार्टीमा थप जीवन्तता ल्याउन सकिन्छ। पार्टी सक्रिय गर्नका लागि उपकरणको हटस्पट ईनेबल गरी साथीहरुलाई हटस्पट ज्पाइन गर्न ईन्भाइट गर्नु पर्ने हुन्छ। यति गरी साथीहरु संग आफ्नो प्लेलिस्ट सेयरगरी संगीतको सामुहिकरुपमा मज्जा लिन सकिन्छ।
गेमिङ असिस्टेन्ट : गेमिङ असिस्टेन्टको उपयोग गरी आफ्नो रुचि अनुसार प्रयोगकर्ताले आफ्नो रुचि अनुसार गेमिङ अनुभव परिमार्जन गर्न सक्छन्। अविभाजित रुपमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने म्याचका लागि यसले ब्यानर नोटिफिकेसन डिजेबल गर्ने सुविधापनि प्रदान गर्छ।
कसैगरी खेल खेलिरहेकै समयमा अर्जेन्ट म्यासेजको रिप्लाइ गर्नु पर्दा समेत फ्लोटिङ विन्डोको सुविधा प्रदान गर्दै यसले सहजता प्रदान गर्छ। यसको प्रयोगबाट गेमप्लेको स्क्रिन रेकडिङ, विशेष शर्टकटको निर्माण तथा नोटिफिकेसन आफू उपयुक्त परिमार्जन गर्ने सुविधा समेत प्राप्त हुन्छ। यी आकर्षक फिचर्सका माध्यमबाट प्रयोगकर्ताले निसन्देह आफ्नो गेमिङ परफर्मेन्समा उल्लेख्य सुधार ल्याउन सक्छन्।
पावर सेभर : ओपोका उपकरणको प्रयोगका बखत ब्याट्री बचतका लागि पनि यसमा विशेष ब्यवस्था गरिएको छ। साथै, फोनमा उपलब्ध गरिएको स्मार्ट पावर सेभर फिचरले प्रयोगकर्तालाई ब्याट्री बचतमा अझ सघाउँछ। स्लिप मोडका साथमा यसमा रहेको स्मार्ट पावर सेभरले ब्याट्रीको प्रयोगलाई पूर्णतः बन्द नै गर्ने क्षमतापनि राख्छ।
ओप्पो कलरओएस सिक्स
आइफोन १२ सार्वजनिक हुँदै, यस्ता छन् विशेषता
मन्त्रीहरूको कामबारे ब्रिफिङ लिँदै प्रधानमन्त्री
संकटमा परेका सञ्चारमाध्यम बचाउन समाजको आग्रह
पर्यटनमन्त्री भट्टराई बोल्दा भर्चुअल मिटिङमा पोर्न भिडियो प्ले भएपछि…
फेसबुकमा पुराना पोष्टलाई एकसाथ कसरी डिलिट वा हाइड गर्ने ?